I-MailButler: Ekugcineni, Umsizi we-Apple Mail leyo Rocks! | Martech Zone
I-MailButler: Ekugcineni, Umsizi we-Apple Mail leyo Rocks!
NgoLwesithathu, Okthoba 12, 2016 NgoLwesithathu, Okthoba 12, 2016 Douglas Karr
Njengoba ngibhala lokhu, njengamanje ngise-mail isihogo. Nginama-imeyili angu-1,021 angafundiwe futhi ukungaphenduli kwami ​​kugijimela emiyalezweni eqondile ngezinkundla zokuxhumana, izingcingo, nemiyalezo ebhaliwe. Ngithumela cishe ama-imeyili ayi-100 futhi ngithola cishe ama-imeyili angama-200 nsuku zonke. Futhi lokho akufaki ukubhaliswa ezincwadini zezindaba engizithandayo. Ibhokisi lokungenayo lami alilawuleki futhi ibhokisi lokungenayo u-zero ingokoqobo kimi njengedinosaur ebomvana.
Ngisebenzise ithani lamathuluzi okusiza futhi ngihlale ngiphoxekile, ngiwajikijela onke futhi ngibuyela ku-Apple Mail onamafulegi, okokuhlunga, kanye nohlu lwama-VIP okuyiminwe engiyisebenzisa ukuxhuma idamu. Akwanele, noma kunjalo. Ngisakhungathekile. Ngifuna ukuphatha igagasi lezicelo kangcono. Futhi ngiyazi ukuthi kuwo wonke ama-imeyili angamakhulu ambalwa, kuhlale kunethuba lamathuba embhangqwaneni okufanele ngibe phezu kwawo.
Cishe ngesonto eledlule, uThaddeus Rex, a uchwepheshe womkhiqizo esebenza nathi kumakhasimende okungenzeka noma angakaze angibone ngikhala obala phambi kwebhokisi lami lokungenayo, ngazise I-MailButler. Ngokungafani namapulatifomu amaningi avela eceleni ahlola noma athathe ibhokisi lakho lokungenayo, i-MailButler iyisengezo esihlangana ngaphandle komthungo ne-Apple Mail. Kuhle kakhulu ukuthi i-Apple kufanele nje iqhume le nkampani bese ingeza lezi zici ngokuzenzakalela.
Snuzela - Ngokusnuza i-imeyili uzoyenza inyamalale okwesikhashana ku-Ibhokisi lokungenayo lakho.
Tracking - Kwazise uma umamukeli eyivulile i-imeyili yakho. Leli ithuluzi elihle kakhulu labasebenzi bokuthuthukiswa kwebhizinisi bebona ukuthi ngabe ithemba lingavula i-imeyili yabo yesethulo noma yesiphakamiso.
Ukuhlela - Hlela ama-imeyili akho ukuthi athunyelwe ngosuku oluthile nesikhathi esizayo.
Hlehlisa ukuthumela - Okwesikhathi esithile ungahlehlisa ukuthunyelwa kwe-imeyili futhi ulungise amaphutha angahle abe khona.
Amasiginesha - dala amasiginesha ama-imeyili amahle ngokukhetha phakathi kwezifanekiso zawo ezahlukahlukene.
I-Cloud Upload - I-MailButler ilayisha ngokuzenzakalela okunamathiselwe kwefayela okukhulu efwini bese ingeza izixhumanisi ezihambisanayo kumyalezo wakho esikhundleni salokho.
Isikhumbuzi Sokunamathisela - Ungalokothi ukhohlwe ukunamathisela ifayela emlayezo futhi owashilo embhalweni womyalezo.
Izithombe ze-Avatar - Nge-MailButler umthumeli we-imeyili angabonwa kalula ngumfanekiso wabo obalabala we-avatar.
Ibhokisi lokungenayo eliqondile - Finyelela amabhokisi akho eposi asetshenziswa kakhulu ngqo kusuka kubha yemenyu - ngokuchofoza okukodwa kude nomaphi
I-Emojis - Lezozithonjana ezibukekayo eziyingxenye yokuxhumana kwanamuhla… manje kuma-imeyili, nazo.
Zikhiphe ohlwini - I-MailButler yenza kube lula kunanini ngaphambili ukuzikhipha ohlwini lwezincwadi ezingafuneki: Ukuchofoza okukodwa!
Nasi isithombe sokuthi ilula kanjani indlela ye-I-MailButler ukuhlela imisebenzi. Enye yezinto engizithandayo ukuthi igcina ukubekwa kwami ​​kokugcina - ngakho-ke nginakho Ngosuku olulandelayo lwebhizinisi ngo-8: 00 AM. Lokhu kuhle ngoba anginendaba nabantu ababona ukuthi ngiphendula i-imeyili yabo ngo-2: 48 AM, heh.
Izici Ezizayo zeMeyiliButler
Imisebenzi - Maka ama-imeyili akho njengezinto okufanele zenziwe ukuze ungakhohlwa ngemisebenzi ebalulekile futhi.
Ibhokisi lokungenayo - Yiba nekhefu, yiba ne-MailButler: Khubaza ngokuzenzakalela ama-akhawunti athile we-imeyili ngokuya ngamahora akho okusebenza.
Quote - Yabelana ngokushesha ngesilinganiso esivela kumyalezo we-imeyili kwezinye izinhlelo noma izinsizakalo.
I-Giphy - Nge-MailButler unokufinyelela okuqondile kuzithombe ezi-animated ze-trazillion ukuveza imizwa yakho kangcono.
Faka i-MailButler MAHHALA!
Ngijabule impela ngalokho I-MailButler ine Ibhokisi lokungenayo ngaphansi kokuthuthukiswa. Izikhathi eziningi kakhulu sithola ama-imeyili asebusuku kakhulu avela kumakhasimende anezicelo esizigxumela. Akukona ukuthi asifuni ukuphendula, kepha sivame ukuqeqesha amaklayenti ethu ukuthi akwazi ukuxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma sebusuku… hhayi umkhuba omuhle ngoba asiwona umnyango wokuxhasa. Ngingathanda ukumisa isikhashana ukuthola ama-imeyili kuze kube usuku olulandelayo lwebhizinisi. Amakhasimende ethu angaba nesimo esiphuthumayo angahlala asishayela.
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokudlulisela kokuthunyelwe ngethemba lokuthi ithani lakho lifaka futhi likhokhela le nsizakalo futhi ngingalithola mahhala! 🙂
Tags: imeyili ye-apulaifu leposi le-apulai-apula imeyili emojiukuhlela imeyili kwe-apulaukulandela imeyili kwe-apulaimeyili ye-apula zikhiphe ohlwiniimeyiliibhokisi lokungenayo u-zeroMailumlimi weposi
I-AdCat: Hlola kuqala, Hlela, uhlele futhi uthuthukise izithombe zakho zesikhangiso semidiya yomphakathi